Izindaba - Umlando wokuthuthukiswa kwendlu yensimbi ekhanyayo ekhaya naphesheya
Muva nje, emakethe yezindlu kwaqhuma ukuqhuma "komoya omncane we-villa villa", le nto entsha idale ukuthi abantu abaningi bayinake. Indlu yensimbi ekhanyayo yavela eChina ngawo-1990. Namuhla, ubuchwepheshe bezakhiwo zensimbi sebuvuthiwe, bukhuthazwa yizwe, futhi sebungene ngokusemthethweni embonweni womphakathi. Ngakho-ke amazwe athuthukile aphesheya ayakha kanjani indlu? Ngenxa yokuqiniswa kokuqwashiswa kwezemvelo kanye nokushoda kwezinkuni nezinye izinto, amazwe amaningi afana ne-United States, Japan, Britain, Australia, akhuthaza ngenkuthalo ukusetshenziswa kanye nokwakhiwa kwezindlu zensimbi zokukhanya eziphansi.
Ngasekuqaleni kweminyaka yama-1960, i-Australia yaveza umqondo wokuthi “ukufakwa ngokushesha kwezindlu esezakhiwe”, kodwa ngenxa yokuthi imakethe ayivuthiwe, ayizange ithuthukiswe kahle. Ngo-1987, kwaqhamuka isakhiwo esinezindonga ezincanyana esinezikhwepha, kwavela nemininingwane ehlangene yase-Australia naseNew Zealand, njenge- / nzs4600 eyakhiwe ngamakhaza yensimbi, yakhishwa futhi yaqaliswa ukusebenza ngonyaka we-1996. Lolu hlobo lwensimbi lunamandla amakhulu. Uma kuqhathaniswa nomthamo ofanayo wezinkuni, yi-1/3 kuphela yesisindo sokhuni. Ubuso bushubile. Ngaphansi kwesimo sokungalungiswa, ukuqina kungafinyelela eminyakeni engama-75.
Izindlu zensimbi ekhanyayo zikhula ngokushesha kakhulu e-United States. Ngo-1965 izindlu ezincane zensimbi zazine-15% kuphela yemakethe yokwakha e-United States; Ngo-1990 lase likhuphuke lafika kuma-53%, kwathi ngo-1993 lase likhuphuke laya kuma-68% kwathi ngo-2000 lase likhuphuke laya kuma-75%. Ukubekwa ejwayelekile, ukwenza i-serialization, ubuchwepheshe, ukuhwebelana kanye nokuhlalisana kwabantu ngezinto zokuhlala kanye nezingxenye cishe kungu-100%. Ukuqashwa kwemishini eyahlukene yokwakha, imishini kanye nezinsimbi kuthuthukiswa kakhulu, kanti iziqu zokuhweba zifinyelela kuma-40%.
Eminyakeni yamuva, ukwakhiwa kwesistimu ekhanyayo yensimbi ngensimbi ebanda kakhulu kuyindlela entsha yokwakha ekhula ngokushesha eYurophu naseMelika. Isetshenziswa kabanzi ezindlini zokuhlala, ezindlini, ezindaweni ezibabazekayo, emakilabhini ehhovisi, ezikoleni, ezibhedlela, ezakhiweni zezentengiso nokunye. E-Australia, kwakhiwa cishe izindlu eziyizigidi ezingama- $ 600 zezindlu ezikhanyayo zensimbi ekhanyayo unyaka ngamunye ezingama-120,000, okubalwa cishe ama-24% wenani lalo lonke ibhizinisi lokwakha e-Australia; EMelika inani lamakhaya akhiwe kusetshenziswa lolu hlelo lakhuphuka lisuka kuma-55,000 maphakathi nawo-1990 laya ku-325,000 ngo-2000. Njengamanje, lolu hlobo lwe-villa yensimbi ekhanyayo seluyisakhiwo esiyinhloko sezakhiwo emazweni athuthukile.